Latest Sports News| Daily Sports News Updates
25 Jan 2021 | सोमबार, १२ माघ, २०७७ | Edition : Nepal | UK | Australia
एफए कपः लिभरपुलविरुद्ध युनाइटेडको रोमाञ्चक जित
एजेन्सी । एफए कप अन्तर्गत प्रिमियर लिग क्लब चिर प्रतिद्वन्द्धी म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लिभरपुलविरुद्धको खेलमा लिभरपुलले जित हात पारेको छ । विस्तृतमा
राष्ट्रिय महिला फुटबल : सावित्राको ४ गोलको मद्दतमा एपिएफ विजयी
युभेन्ट्सद्वारा बोलोग्ना पराजित
साल्केविरुद्ध बायर्नको सानदार जित
भ्यालेन्सियालाई हराउँदै एट्लेटिकोले रियलसँगको अग्रता बढायो
एल्चेविरुद्ध बार्सिलोनाको सहज जित
बार्सिलोनाले नयाँ खेलाडीहरु किन्नुपर्छ
विश्वकपको अन्तिम १६ को खेल तालिका यस्तो छ (नेपाली समयअनुसार)
काठमाडौं । रसिया विश्वकपको समूह चरणको खेल सकिएसँगै नकआउट चरणको खेल शनिबारबाट सुरु हुने भएको छ । फिफाको नियमअनुसार हरेक समूहको विजेताले अर्को समूहको उपविजेतासँग खेल्ने नियमा अनुसार हरेक १६ राष्ट्रले प्रतिद्धन्द्धी पाएका छन् ।
विश्वकपको अन्तिम १६ मा युरोपबाट १० टिम, बाहिरिनेमा को–को ?
काठमाडौं । बिहीबार रातिको खेलसँगै रसिया विश्वकपको अन्तिम १६ मा पुग्ने टिमहरुको टुंगो लागेको छ । अन्तिम १६ मा युरोपबाट १० टिम, दक्षिण अमेरिकाबाट ४ टिम, एशियाबाट १ टिम तथा उत्तर अमेरिकाबाट १ टिम गरी १६ टिम अन्तिम १६ मा पुगेका हुन् ।
‘फेयर प्ले’ले जापानलाई अन्तिम १६ मा पुर्‍यायो
काठमाडौं । अंक, गोल अन्तर, हेड टु हेड लगायतको सबै समान भए पनि जापानले भन्दा बढी पहँलो कार्ड खाँदा सेनेगल विश्वकपबाट बाहिरिनु परेको छ ।
विश्वकपको अन्तिम १६ मा कुन राष्ट्रको प्रतिद्धन्द्धी को ?
काठमाडौं । रसिया विश्वकपको अन्तिम १६ को समिकरण पुरा भएको छ। बिहीबार राति सम्पन्न खेलबाट जापान र कोलम्बियाले पनि अन्तिम १६ मा स्थान बनाएसँगै अन्तिम १६ को समिकरण पूरा भएको हो।
विश्वकपमा समूह चरणको ४८ खेल सकिँदा मात्र ५ खेलको नतिजा बराबरी (सम्पूर्ण खेलको नतिजा)
काठमाडौं । जुन १४ अर्थात जेठ ३१ बाट सुरु भएको रसिया विश्वकपको समूह चरणका खेलहरु सकिएका छन् । समूह चरणका ४८ खेल सकिँदा १ खेल मात्रै गोल रहित बराबरीमा सकिएको छ ।
बेल्जियमसंग १ शुन्यले पराजित भयो इंग्ल्याण्ड, दुवै टीम दोस्रो चरणमा
विहिबार सम्पन्न समुह चरणको अन्तिम खेलमा बेल्जियमसंग १ शुन्यले पराजित भएपनि इंग्ल्याण्ड नकआउट चरण प्रवेश गरेको हो ।
सेनेगल भर्सेस कोलम्बिया, यस्तो छ पृष्ठभुमि
काठमाडौँ । सन् २०१४ मा पहिलो पटक उनीहरुबीच मैत्रीपुर्ण खेल भएको थियो । उक्त मैत्रीपुर्ण खेलमा कोलम्बियाले २–० गोलले सेनेगललाई पराजित गरेको थियो ।
समूह ‘जी’को विजेता इंग्ल्याण्ड बन्ला कि बेल्जियम ?
काठमाडौं । विश्वकपको समूह ‘जी’ अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा आज इंग्ल्याण्ड र बेल्जियमबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यो खेलको नतिजाबाट उक्त समूहको विजेता को बन्ने भन्नेबारेमा निर्णय हुनेछ ।
अन्तिम १६ मा पुग्न जापानलाई बराबरी भएपनि पुग्ने, सान्त्वना जितको खोजीमा पोल्याण्ड
काठमाडौं । आज ७ः४५ बजे समूह ‘एच’का दुई खेलहरु हुँदैछन् । समूह ‘एच’मा जापान र पोल्याण्ड तथा सेनेगल र कोलम्बियाबीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो ।
महिला पत्रकारलाई किस गर्न खोजेपछि...
काठमाडौँ । विश्वकपमा केही यस्ता अनौठा घटनाहरु घटेका छन् जसका कारण मिडियाकर्मी पनि शिकार भएका छन् । जारी विश्वकपमा
सेता हिमाल कालापत्थरमा परिणत
मनाङ । हिउँपर्ने याममा हिउँ नपर्दा कालापत्थर मात्रै देखिएको मनाङको अन्नपूर्ण, गङ्गापूर्ण र लमजुङलगायत हिमाल । सँधैजसो मङ्सिरको पहिलो सातादेखि हिउँ पर्न शुरु हुने यस जिल्लामा यस पटक भने माघ सकिन लाग्दासमेत हिउँ देख्न पाइएको छैन ।
विश्व रेकर्डको तयारीमा लामो पुल
पुदिनाको फाइदै फाइदा
काठमाडौं । हाम्रो गाँउघर वरपर सहज रुपमा पाइने बनस्पति पुदिनालाई अचारको रुपमा उपयोग गर्दै आएका छौं । पुदिना स्वास्थ्यका लागि पनि धेरै लाभदायक मानिन्छ । अझ भन्नुपर्दा पुदिना चिया स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी छ । पुदिना चियाको स्वाद मात्रै नभएर स्वास्थ्यका लागि समेत निकै राम्रो मानिन्छ ।
थाइराइडका रोगीले कहिल्यै नगर्नुहोस् यी पाँच कुराको सेवन
एजेन्सी । भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा १९ वर्षीया किशोरीलाई एक दिनका लागि मुख्यमन्त्री बनाइँदैछ। राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा राज्यको हरिद्वार जिल्लास्थित दौलतपुर गाउँकी सृष्टि गोस्वामीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लागिएको हो।